Haatuf Iyo Yuusuf Gaboobe
Haatuf Iyo Yuusuf Gaboobe: Cambaar Ku Taala Saxaafadda Somaliland
Wargeyska Haatuf, oo ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa, ayaa m uddooyinkan dambe noqday cambaar ku taala saxaafadda madaxabanaan ee Somaliland .
Haatuf, oo uu guddoomiye u yahay Yuusuf Cabdi Gabobe, xiliyada qaarna ahaan jirtay jar iirad magac leh, ayaa muddooyinkan dambe noqotay magac u yaal, ka dib markii ay ka ha yaameen saxafiyiintii wargeyskaas hagi jirtay oo ah rag magac ku leh mihnadda saxaafa dda. Ka dib markii uu Wargeysku u xuub siibtay Afhayeenka xukuumadda.
Haatuf, waxa ay la soo baxday inay weerarto saxafiyiinta kala duwan ee Somaliland, kuw aas oo ay ku cambaarayso gudashada waajibaadkooda iyo soo bandhigidda dhaliilaha xu kuumadda Somaliland oo uu Wargeysku difaaco, si gaar ah waxa uu Wargeysku ugu caan baxay muddooyinkan dambe inuu u difaaco Wasiirka Arrimaha gudaha oo Adeer u ah Yu usuf Cabdi Gabobe iyo Madaxtooyada oo la sheego inay Wargeyska ku samayso naas nuu jin.
Guddoomiyaha Haatuf, waxa uu dhawaan ka masayray saxafiyiin reer Somaliland ah oo d a’yar kuwaas oo damacsanaa inay tababar u tagaan magaalada Nayrobi ee dalka Kenya, balse arrimaha socdaalka dartood uu u hirgeli waayay qorshahoodii, waxaanu wargeysku si qaawan u weeraray weriyayaasha oo waxa keliya ee uu ku haystay ahayd tababarka as ay tagayeen oo iyaga u suurto geli waayay.
Sidaas oo kale waxa uu Wargeysku dhawaan weeraray Wargeyska Geeska Afrika oo ay markaas is qabteen madaxtooyada, iyadoo Haatuf xiligaas la safatay madaxtooyada, ka na gudubtay bahda ay mihnadu walaalaysay. Waxa keliya ee uu Guddoomiyaha Haatuf ku la caloobay Wargeyska Geeska Afrika, waxa ugu horaysa dhinaca suuqa oo uu Wargeys ka Geeska Afrika, jariirada Haatuf ka saaray suuqii, ka dib markii ay noqotay jariirad u sa maysan buqdi iyo xiqdi, been abuur iyo wanjalaad. Halka uu Geeska Afrika noqday warge ys ay bulshadu ku soo hirato.
Sidaas oo kale waxa uu Wargeysku weerar ba’an oo qaawan ku hayaa shirkadaha madax a banaan ee Somaliland oo malaha marka uu ka waayo laaluush; uu ku qaado weerar qaa wan iyo eedaymo aanay waxba ka jirin. waxa uu ku hayaa dacaayad been abuur ah oo ay faafiyaan dad ka xun horumarka shirkadahan, kuwaas oo adeegsada Haatuf.
Wargeyska Haatuf iyo guddoomiyihiisa is bed-bedelka badan ee Yuusuf Cabdi Gabobe, cid kasta oo uu u arko inay danihiisa qarsoon turqayso waxa uu u arkaa argagixiso isagoo ku eedeeya inay taageeraan kooxaha xag jirka ah ee Somaliya. Arrintan oo ah wax uu Yuu suf Cabdi Gabobe ku qadhaabto, waxa ay ka socon weyday xukuumada uu indho la’aanta ku taageero oo dhawr goor xisbiyada mucaaradka ku eedaysay inay ka tirsanyihiin koox aha xag jirka ah ee Somaliya.
Waxa kale oo la xasuusan yahay in uu Yuusuf Cabdi Gaboobe weerar ku qaaday rag reer Somaliland ah oo ay qaarkood xilal ka hayeen wakhtigaas Somaliland, kuwaas oo uu shee gay in ay u adeegi jireen NSS-tii Siyaad Barre, isla markaana ay u xil saarnaayeen boqno goynta dadka reer Somaliland, laakiin markii si dhab ah loo baadhay arrintaas waxa soo baxday in uu Yuusuf shakhsiyaadkaas ka waayay dano gaar ah oo uu markaas ka doona yay. Waxa taas caddayn u ahayd markii ay daboolka saareen in ay soo gudbiyaan xogta dadkii ugu cadcadaa ee NSS-tii Siyaad Barre ee ku suntanaa xasuuqa iyo gudbinta xogta lagu laynayo shacabka Somaliland iyo saraakiisha ururka SNM.
Ugu dambayn Haatuf iyo guddoomiyihiisu oo col la’ ah fikirka xorta ah iyo kobaca da’yarta saxaafadda Somaliland ma jecla inuu arko amaba maqlo saxafi reer Somaliland ah oo mag ac iyo milgo ka gaadhay mihnadda uu isagu ku qadhaabto. Bal xasuuso sidii xaasidnimada lahayd ee uu uga horyimid markii sannadkan uu guddoomiyaha Golaha Guurtidu Md. Sal eban Maxamuud Aadan xubinimada komishanka doorashooyinka u xulay Weriye Xasan Siciid Yuusuf oo ah saxafi magac ku leh mihnadda saxaafadda ee Somaliland. Yuusuf, wax a uu xilligaas Xasan Siciid u jeediyay eedaymo aanay wax ka jirin oo keliya uu ku doonay ay inuu kaga hor istaago jagadaas oo magac u soo hoyn lahayd saxaafadda Somaliland g uud haanteedba. Xilligaas waxa la isku raacay in Haatuf fulisay qorshe uu Rayaale doona yay inuu Xasan Siciid kaga hor istaago komishanka doorashooyinka.
Haatuf iyo guddoomiyahooda marka loo yimaado difaaca Qaranimada Somaliland waxa uu dadka isu tusaa inuu yahay nin u dagaalama, laakiin taas waxba kama jiraan. Dhawaan w axa dalka yimid Safiirka Masar ee Somaliya oo si cad Hargeysa uga sheegay inaanay jirin wax Somaliland la yidhaahdaa, waxaana warkaas safiirka si hufan u baahiyay iyo wuxuu yidhiba Jamhuuriya iyo Geeska Afrika oo umadda tusay ujeedada ninkaas Masriga ah. Laakiin Yusuf Gabobe waxa uu hadalkii safiirka u dhigay nin nasteex u ah Somaliland.
Si kastaba ha ahaate, Haatuf iyo guddoomiyihiisa oo dagaal ba’an kula jirta saxaafadda madaxabanaan iyo shirkadaha madaxabanaan, waxa ay kharibtay mihnadii saxaafadeed.